Ahoana ny fametrahana Lighting Team rom amin'ny Huawei u8650 | Androidsis
Ekipa manazava Rom: Huawei U8650
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nasehoko anao ny dingana hanarahana hanongotra sy hametahana ClockworkMod Recovery amin'ny Huawei na 8650Ianareo rehetra izay nanao ny tutorial sy nametraka ny ClockworkMod Recovery sambatra ianao satria azonao atao ny mametraka ilay rom mahafinaritra Hitondrako anao amin'ity terminal mahafinaritra ity.
Ilay rom namboarin'i PcHack3 ary navoaka tao amin'ny HTC Mania, fanafiana masina Huawei u8650 amin'ny fisehoana hafa tanteraka, ary miaraka amin'izay tsy mety kilema, feno tsara Tweaks izay mahatonga ny fiasan'ity terminal ity dia mahazo isa maro na amin'ny hafainganana na amin'ny ampitomboy ny fahatsiarovana Ram maimaim-poana.
Miorina amin'ny ity rom ity Android Gingerbread 2.3.5, tsy manana karazana lag ary mandeha tsara ny zava-drehetra, na ny fakan-tsary ary ny Radio FM, fampiharana izay manome olana amin'ny rom hafa, ny fampiharana nofidian'ny mpahandro ho mpandefa manokana ho an'ity asa ity QQLauncher, Trano misy fisehoan'ny roms Miui.
1 Fanomanana ny Huawei u8650
2 Fametrahana ny ekipa Lightning Team rom
Fanomanana ny Huawei u8650
Mazava ho azy fa tsy maintsy manana terminal isika Huawei u8650 miorim-paka ary miaraka aminy ClockworkMod Recovery napetraka araka ny tokony ho izy, toy izany koa ny deboka amin'ny USB dia tsy maintsy ampandehanana, ity dia azo jerena ao amin'ny sehatra, fampiharana, menio fampandrosoana.
Tokony hanana izany koa isika ny batterie dia voadidy araka izay tratrany, ity dia toe-javatra tena ilaina ka tsy azo avela ny antsasaky ny flashing, ankoatry ny fananana ny batery ao amin'ny 100 X 100, ho azonay antoka fa ny rom vaovao napetraka dia tsy manome olana amin'ny fiainana bateria mahantra.
Fametrahana ny ekipa Lightning Team rom
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ampidino ny zip an'ny rom, raha alaina avy eo dia alainay ihany fa tsy decompressing ny fakan'ny sdcard an'ny Huawei u8650, avy eo isika dia afaka mamono ny telefaona ary mampody azy amin'ny fomba fanarenana.
Mba hidirana amin'ny fanarenana, manomboka amin'ny finday maty tanteraka, dia hodinihintsika amin'ny alàlan'ny fanindriana ireto bokotra manaraka ireto amin'ny fotoana iray ihany: bokotra ambony + hery.
Indray mandeha amin'ny efijery fanarenana lehibe dia hanaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Miverena miverina amin'ny efijery fanarenana lehibe
Misafidiana zip amin'ny sdcard, safidio ny zip amin'ny rom ary hamafiso ny fametrahana azy
Reboot sistem izao
Amin'ity dia hametraka ny rom an'ny PcHack3 tsara ao amin'ny terminal anay, ary afaka manamarina ny tsy mampino isika izao fampisehoana ary ny fahaiza-manao customization lehibe an'io asa manaitra io.
Fanazavana fanampiny - Huawei u8650, ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery
Loharano - HTC mania
Ampidino - Ekipa manazava an'i Rom
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ekipa manazava Rom: Huawei U8650
joam280 dia hoy izy:
Bokotra maitso antso ?? Tsy manana bokotra antso maitso ity finday ity, araka ny eritreritiko.
Raha azonao hazavaina ho ahy ?? !!
Mamaly an'i joam280
Miala tsiny namana, fa slip izay efa voahitsy.
Sinay979 dia hoy izy:
misaotra betsaka an'ireo lesona tokony apetrakao koa ny sary
Valiny tamin'i Sinay979
Junior_ruben dia hoy izy:
Inona no hitranga raha tsy manana efitrano hafa napetraka aho?
Mamaly an'i Junior_ruben
Tsy azoko ilay browser na ao amin'ny google aza